इटहरीमा भाटभटेनीको सबैभन्दा ठूलो सुपरस्टोर तयार, भदौ १९ देखि संचालनमा आउँदै – Khoj Dainik
इटहरीमा भाटभटेनीको सबैभन्दा ठूलो सुपरस्टोर तयार, भदौ १९ देखि संचालनमा आउँदै
August 11, 2021 adminLeaveaComment on इटहरीमा भाटभटेनीको सबैभन्दा ठूलो सुपरस्टोर तयार, भदौ १९ देखि संचालनमा आउँदै
इटहरी ।प्रदेश नम्बर १ मा किनमेलका धेरै केन्द्र त छन् तर मनोरञ्जनका पर्याप्त स्थान छैनन्। पूर्वका उपभोक्ताले बिना मनोरञ्जन किनमेल गरिरहेको अनुभव भाटभटेनीका संचालक मीनबहादुर गुरुङका लागि लगानी अवसर देखे।
साढे दुई वर्षअघि उनले यस प्रदेशको उदाउँदो आर्थिक केन्द्र र शहर इटहरीमा एउटा भव्य र सबैभन्दा ठूलो सुपर स्टोर ल्याउने योजना बनाए।
‘प्रदेश १ मेरो जन्म क्षेत्र पनि हो। म खोटाङमा जन्मिएको र धरानमा पढेर यत्तिको भएको हुँ। त्यसैले पूर्वमा एउटा आकर्षक स्टोर किन नल्याउने ? जहाँ पसेपछि मान्छे कम्तीमा २ घण्टा त्यहीँभित्र हराओस्,।
मीन बहादुरको यही योजनाको फलस्वरूप भाटभटेनीले पूर्वको इटहरीमा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सुपर स्टोर सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ।
बडादसैं र अन्य चाडबाडको पूर्वसन्ध्यामा आगामी भदौ १९ गतेदेखि इटहरी चोकभन्दा ४ किलो मिटर पश्चिममा पर्ने लबीपुरमा सुपर स्टोर सञ्चालनमा आउँदैछ।
यसका लागि गुरुङले एक महिना अगाडि नै भवनको पूजाआजा गरिसकेका छन्। र, समयमा निर्माण सक्न उनी त्यही बसेर कामदारलाई हौंस्याइरहेका छन्।
दुई अर्ब लगानी यहाँको जमिन र भौतिक संरचनाका लागि मात्र भाटभटेनीले २ अर्ब लगानी गरिसकेको गुरुङले जानकारी दिए।भाटभटेनीका व्यवस्थापक विनोद भट्टराईले सुपर स्टोरको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको र सरसामानहरू सजाउने काम सुरु भइसकेको बताए।
व्यवस्थापक भट्टराईका अनुसार १८ महिनाअघि ३५ कट्ठा जमिनमा भाटभटेनीको निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो। यसको उद्घाटन गत पुसदेखि माघ महिनासम्ममा नै गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर कोभिड सङ्क्रमणका कारण ६ महिना ढिला भयो।
यहाँ भाटभटेनीका ए, बी र सी गरी ३ वटा ब्लक छन्। तीन वटै ब्लकको कुल क्षेत्रफल ३ लाख वर्गफिट छ। सबै ब्लकमा बेसमेन्टसहित ७ तला छन्। बेसमेन्टको क्षेत्रफल ५० हजार वर्गफिट छ र यसमा ५ सय गाडी सजिलै अटाउने क्षमता छ।
उनले मनोरञ्जनका लागि भुइँतलामा ८ सय वर्गफिटका ३ वटा फाउन्टेन बनाइएको जानकारी दिए।ए र बी ब्लकमा भाटभटेनीकै सामान राखिनेछन्। जसमध्ये भुइँतलामा ग्रोसरी, फ्रोजन आइटम, शृङ्गार प्रसाधन, हरियो तरकारी, पेय पदार्थ आदि राखिनेछन्। ग्रोसरीमा १८ वटा काउन्टर रहनेछन्। ग्रोसरीभित्रै आइसक्रिम पार्लर पनि राखिएको छ।
पहिलो तला किचनवेयर र बालबालिकाका खेलौनाका लागि छुट्याइएको छ। यसमा ७ वटा काउन्टर हुनेछन्।
दोस्रो तलामा कपडा, जुत्ता आदि राखिनेछन् र यसमा १० वटा काउन्टरको व्यवस्था गरिएको छ। भाटभटेनीका अन्य स्टोरमा नपाइने ब्रान्डेड र मल्टिनेसनल कम्पनीका कपडा र जुत्ता पनि यस तलामा उपलब्ध हुने भट्टराईले बताए।
तेस्रो तलामा इलेक्ट्रोनिक आइटम, लगेज, गलैँचा आदि सजाइनेछ। यसमा १ काउन्टर राखिनेछ। चौथो तलामा हङकङको विश्व प्रसिद्ध मल्टिनेसनल कम्पनी क्यू एन्ड क्यूका फर्निचर हुनेछन्। पूर्वका लागि यी फर्निचर अत्यन्त नयाँ र आकर्षक हुने उनले दाबी गरे।
फर्निचरको तलाभन्दा माथि २ वटा मल्टिप्लेक्स सिनेमा हल हुनेछन्। एक हलको दर्शक क्षमता ५ सय हुनेछ।त्यस्तै सी ब्लकको भुइँतलामा केएफसी, काठमाडौंको पेपे पिजा र आँगन रेस्टुरेन्ट हुनेछ। यही तलामा बालबालिका खेल्ने ८ हजार वर्गफिटको प्ले ग्राउन्ड पनि बनाइएको छ। यसभन्दा माथि हिमालय जाबा कफीको रेस्टुरेन्ट राखिनेछ।
हिमालय जाबा कफीभन्दा माथिका तला क बर्गका वाणिज्य बैङ्कका लागि छुट्याइएको छ। यही ब्लकमा बैङ्कका १० वटा एटीएम पनि राखिनेछन्।इटहरीको भाटभटेनीमा प्यासेजमा हिँड्न अटोवाक राखिएको छ। प्यासेजमा अटोवाक नेपालमै पहिलो पटक इटहरीमा भाटभटेनीले राखेको उनले सुनाए।
व्यवस्थापक भट्टराईले भाटभटेनीले यही साउनको पहिलो हप्तादेखि १ सय युवायुवतीलाई परिचालन गरेर इटहरी र वरपरका क्षेत्रका १ लाख घरधुरीमा पुगेको बताए।वरपरका वराह क्षेत्र, इनरुवा, रामधुनी, दुहबी, सुन्दरहरैँचा, पथरी, केराबारी, लेटाङ लगायतका स्थानमा भाटभटेनीका कर्मचारी घरघरै पुगेर यही १९ गतेदेखि इटहरीमा भाटभटेनीमा किनमेल र मनोरञ्जन गर्न आउन निमन्त्रणा दिइरहेका छन्।
यसबाहेक विराटनगर तथा सुनसरीको सेतुबन्ध नाकाबाट भित्रने भारतीय ग्राहकका लागि पनि यो ठाउँ आकर्षक केन्द्र हुने विश्वास गरिएको छ।इटहरीको भाटभटेनीमा १० हजार व्यक्ति एकै पटक पस्दा पनि भीडभाड नहुने र दूरी कायम हुने विनोदको जिकिर छ।
गाईमा पनि रे’बिज देखियाे : चितवनमा रे’बिजले धमाधम गाई म:र्न था’ले
तनहुँकि ९ महिना बालिकालाई के आइलाग्यो यस्तो ? अब के होला हे भगवान ! सके सहयोग नसके १ शेर गरौ
मानिसलाई आक्रमण गर्ने बाघ समातियो